Tag: tilmaamaha fiidiyowga | Martech Zone
Tag: tilmaamaha fiidiyowga
Waxaan ku soo kordhinay dadaalkeena fiidiyowga halkaan Martech waana wax aad u fiican… si qoto dheer uga qayb gal Youtube iyo baraha bulshada oo leh 1 ilaa 2-daqiiqo Clips Suuqgeynta. Nasiib darrose, weli waxaa jira khuraafaad badan oo halkaa yaal oo la xiriira kharashyada iyo dadaalka looga baahan yahay in lagu soo saaro fiidiyowyadaada u gaarka ah ee loogu talagalay dadaalka suuqgeynta. Waxa ugu fiican oo dhan, uma baahnid inaad ka shaqeysid dhammaan caqabadaha tikniyoolajiyadda - waxaa jira xulashooyinka cajiibka ah ee martigelinta fiidiyowgaaga hadda la heli karo. Fiidiyowyo
Dhibaatada hadda jirta, xirfadleyda ganacsiyada waxay helayaan naftooda go'doon iyo ka shaqeynta guriga, iyagoo ku tiirsan istiraatiijiyadda fiidiyowga ee shirarka, wicitaanada iibka, iyo shirarka kooxda. Hadda waxaan go'doominayaa naftayda usbuuca soo socda tan iyo markii saaxiibkey uu la kulmay qof ka baaray COVID-19, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan soo uruuriyo talooyin kaa caawinaya inaad si fiican uga faa'iideysato fiidiyowga inuu yahay dhexdhexaadiyahaaga. Talooyin Muuqaal ah oo Xafiiska Gudaha ah oo leh hubin la'aanta dhaqaalaha,